မဟုတ်မမှန် သတင်းတုများ၏ ပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့သော ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တို့၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံ / The Washington Post
By ဧရာဝတီ 22 February 2017
၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ၏ ရက်တရက်တွင် ဆီးရီးယားဒုက္ခသည် အနက်စ်မိုဒမ်မီသည် ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် အထူးခြားဆုံး သော သူ၏ ဆယ်ဖီ ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ သူသည် ဘာလင်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်ုးသို့ ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် အင်ဂျလာမာကယ် လာရောက်စဉ် သူမနှင့် အတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကာ ထိုဓာတ်ပုံသည် ဂျာမနီတွင် ခိုလှုံခွင့် တောင်းသော ဒုက္ခသည် တသန်းကို လက်ခံရန် မာကယ်ဟ၏ အရေးပါသောဆုံး ဖြတ်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုသော သင်္ကေတ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုဓာတ်ပုံသည် အနက်စ်မိုဒမ်မီကို လက်ယာစွန်း ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများ၏ ပစ်မှတ်အဖြစ်လည်း ပြောင်းလဲ ပေးခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းအတုများနှင့် ပြုပြင်ထားသော ဓာတ်ပုံများက သူနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဘရပ်ဆဲလ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတို့ ကို ဆက်စပ်ပေးသည်။ ထိုနောက် ဒီဇင်ဘာလက ဘာလင်ခရစ်စမတ် ဈေးတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြန် သည်။ အခြားသော ပုံတပုံတွင်မူ သူသည် မကြာသေးမီက အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တဦးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု မှားယွင်း စွပ်စွဲ နေပြန်သည်။ ထိုကြောင့်သူသည် ယခုအခါ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ပစ်မှတ်ထားလာရသည်။
တရားရုံးသို့ ရောက်ရှိလာသော တရားစွဲဆိုမှုသည် ဖေ့စ်ဘုတ်အနေဖြင့် ထိုသို့သော ကြောင်းအရာ များကို ဖယ်ရှားရန် အတွက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် ဟန့်တားရန်ပင် တွန်းအားပေးနေပြီး ဖေ့စ်ဘုတ် သည် မီဒီယာကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းက ထုတ်ဝေသည့် အကြောင်းအရာများ အတွက် ဥပဒေအရ တာဝန် ရှိကြောင်း လက်ခံရမည်ဟု တောင်းဆိုသည်။
ထိုတရားစွဲဆိုမှုသည် သတင်းတုများ တိုးပွားလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်အနေဖြင့် ပိုမို တာဝန်ယူစေရန် ကြိုးစားသော နောက်ဆုံး ထပ်မံအားထုတ်မှု ဖြစ်သည်။ ဥရောပတွင် လူဦးရေ အများဆုံးဖြစ်သော ဂျာမနီနိုင်ငံသည် ပုဂ္ဂလိက လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိပါးပုတ်ခတ်ခြင်းနှင့် မဟုတ်မမှန် ဝါဒဖြန့်ခြင်းကို သည်းခံနိုင်မှု နည်းသော မြတ်နိုးဖွယ်ရာ အယူအဆများနှင့် အတူ အထူးသဖြင့် ဖေ့စ်ဘုတ် အတွက် ပြင်းထန်သော စစ်မြေပြင်ဖြစ်လာသည်။
“ဖေ့စ်ဘုတ်က သူတို့ဆီကို စာနဲ့ ထောက်ပြတဲ့ အင်တာနက် လိပ်စာတွေကိုပဲ ဖျက်ပစ်တယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒီက တဆင့်ပြန်တင်တာတွေ အားလုံးကိုပါ ဖျက်ပစ်ပေးဖို့ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာ” ဟု မိုဒမ်နီ၏ ဥပဒေအကျိုးဆောင် Chan-jo Jun က ပြောသည်။
သတင်းတုများ ဖြန့်ချိရန် ခွင့်ပြုခြင်းကြောင့် ဖေ့စ်ဘုတ်သည် ဝေဖန်ခံနေရပြီး ထိုပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ရန် အစီအစဉ် ချမှတ်မည်ဟု ကတိပြုသော်လည်း ဖေ့စ်ဘုတ်သည် သတင်းအချက်အလက် မျှဝေရန် နေရာသာ ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်ခြင်း မရှိဟု ဆိုပြန်သည်။
ဥရောပသားတို့မှာ အထူးသဖြင့် ဖေ့စ်ဘုတ်ကို အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ဥရောပကော်မရှင်သည် လွန်ခဲ့သော မေလက ဖေ့စ်ဘုတ်နှင့် အခြားသော လူမှုကွန်ရက်များ အတွက် ကျင့်ဝတ်များကို သဘောတူခဲ့ပြီး ထိုကျင့်ဝတ် အရ ဝက်ဆိုက်များသည် မေးခွန်းထုတ်စရာ အကြောင်းအရာများကို ၂၄ နာရီ အတွင်း ဖယ်ရှား ပေးရမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဥရောပ၏ မည်သည့် အပိုင်းတွင်မျှ ဂျာမနီလောက် ဖိအားကြီးမားခြင်း မရှိပေ။ ဂျာမနီသည် နာဇီဝါဒ ဖြန့်ချိရေးနှင့် စစ်အေးခေတ် စနစ်များ၏ ခါးသည်းသော အတွေ့အကြုံကြောင့် အမုန်းစကားနှင့် သတင်းတုများကို အလွန်တရာ မုန်းတီးသော ယဉ်ကျေးမှု တရပ် ပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။ လက်ယာစွန်းနှင့် ရုရှလိုလားသော ဝက်ဆိုက်များ ပျံ့နှံ့လာခြင်းကြောင့်လည်း ၎င်းတို့ မျက်လုံးများကို မာကယ်၏ သတင်းများအပေါ် စူးစိုက်လာစေခဲ့သည်။ အင်ဂျလာမာကယ် သည် စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် နောက်တကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆွယ်စဉ် သတင်းတု ပြဿနာကို လူထုဆွေးနွေးပွဲများ၏ ရှေ့တန်းနှင့် ဗဟိုချက်တွင် ရှိလာခဲ့သည်။
အပြောင်းအလဲ အတွက် တောင်းဆိုမှုများကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် ဖေ့စ်ဘုတ်သည် အကျိုးအမြတ် မယူသော သတင်းပညာကွန်ရက် ဖြစ်သည့် Corrective နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဂျာမနီတွင် လုပ်မည့် အားထုတ်မှုသစ်များကို ကြေညာခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင် သတင်းသမားများ၏ အကူအညီဖြင့် ဖေ့စ်ဘုတ်သည် အသုံးပြုသူများ မျှဝေသည့် သတင်းတုများဟု သတ်မှတ်သည့် သတင်းများကို သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော သတင်း ဟု ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဂျာမနီသည် ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ထိုထက်မက ဖိအားပေးနိုင်သည်။ ဂျာမန်တရားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဖေ့စ်ဘုတ်၊ တွစ်တာနှင့် ယူကျုတို့သည် အသရေပျက်စေနိုင်သော သတင်းတုများ၊ အမုန်းတရား လှုံ့ဆော်သော သတင်းများ၊ ပြည်တွင်း ဥပဒေချိုးဖောက်သော သတင်းများကို မည်မျှမြန်မြန် ပြန်လည်ဖယ်ရှားကြသည်ကို စောင့်ကြည့်နေပြီ ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလက စစ်ဆေးစဉ်ကထက် နောက်တကြိမ် စစ်ဆေးချိန်တွင် တိုးတက်မှု မရှိလျှင် ဂျာမနီနိုင်ငံသည် ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဥပဒေလိုက်နာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ထားသည်။
“ခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းဖို့ ကျနော်တို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ နောက်ဆုံး ရွေးစရာအနေနဲ့လည်း ဒဏ်ငွေရိုက်ဖို့လည်း စီစဉ်နေပါတယ်” ဟု တရားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရသူ Philip Scholz က ပြောသည်။
ဖေ့စ်ဘုတ် ကို အရေးယူရန် အမှုတခု တည်ဆောက်ရန် ဂျာမန်အစိုးရ ရှေ့နေများကို ဖြောင်းဖျရန် ကြိုးစားနေခဲ့သည်မှာ နှစ်အတန်ကြာပြီ ဟုလည်း မိုဒမ်နီ၏ ဥပဒေအကျိုးဆောင်က ပြောသည်။ ဖေ့စ်ဘုတ်သည် ရန်လိုသော ကြောင်းအရာများ၊ အမုန်းတရား လှုံ့ဆော်သော အကြောင်းအရာများကို ဖြန့်ချိခွင့် ပြုနေသည် ဟူသော သူ၏ ပြောကြားချက်ကို ဟမ်းဘတ်နှင့် မြူးနစ်မှ အစိုးရရှေ့နေများက လေ့လာကြသော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ အရေးယူခြင်း မရှိသေးကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
မိုဒမ်နီ၏ အမှုသည် ဖေ့စ်ဘုတ်အနေဖြင့် အသုံးပြုသူများ တိုင်ကြားလာသည့် မှားယွင်းသော၊ တရားမဝင်သော သတင်းများကို ဖြုတ်ချရန်သာမက ကွန်ရက်ကို ရှာနိုင်သော အထူးစစ်ဆေးမှု စနစ်များ ချမှတ်ရန်နှင့် ထိုသို့သော အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆက်စပ် ဖြစ်ရပ်များကိုပါ ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘုတ်က အတုအယောင် ပို့စ်များကို ပယ်ဖျက်ပေးသည်ဟု အခိုင်အမာ ပြောဆိုသော်လည်း ထပ်မံတင်လာသည့် ရုပ်ပုံများကို မကြာသေးမီ ရက်သတ္တပတ် များအတွင်းတွင် တွေ့နေရသည်ဟု Jun က ဆိုသည်။
ထိုသို့ပြောဆိုရခြင်းမှာ ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် ယနေ့တိုင် မျှဝေနေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု ဥပဒေအကျိုးဆောင် Jun ပြောသည့်ပုံ သုံးခုကို ဦးတည်ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံတခုမှာ မိုဒမ်နီနှင့် မာကယ်တို့ ဆယ်လ်ဖီ ရိုက်ထားသော ပုံကို ခရစ်စမတ် မတိုင်မီ ညနေက ဘာလင်မြေအောက်ရထား ဘူတာရုံတွင် အိုးအိမ်မဲ့ တဦးကို မီးရှိုသည်ဟု သံသယရှိသော လူငယ်အုပ်စုကို လုံခြုံရေး ကင်မရာက ရိုက်ကူးထားသော ပုံတို့ ယှဉ်တွဲထားသည့်ပုံ ဖြစ်သည်။ ထိုသံသယရှိခံရသူများ ထဲမှ တဦး၏ ပုံကို အဝိုင်းပြထားပြီ မိုဒမ်နီဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်း ဖော်ပြထားသည်။
ပုံ၏ စာတွင် “မာကယ်နှင့် တိုက်ခိုက်သူတဦးတို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ရိုက်ထားသော ဆယ်လ်ဖီ” ဟု ရေးသားထားသည်။
ဖေ့စ်ဘုတ် တွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် အခြားပို့စ် တခုတွင်မူ မိုဒမ်နီနှင့် မာကယ် တို့ပုံကို ဘာလင်ခရစ်စမတ် တိုက်ခိုက်မှု နောက်ခံတွင် ရောစပ်ပြသထားပြီး “သူတို့တွေဟာ မာကယ်ရဲ့ သေမင်းတွေ” ဟုရေးသားထားသည်။
အစောပိုင်းက တဖက်သတ် စွပ်စွဲချက်တခုတွင်မူ မိုဒမ်နီသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်က ဘရပ်ဆဲလ်တွင် ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ဆက်စပ်ဖော်ပြထားပြီး၊ မာကယ်သည် အကြမ်းဖက်သမားနှင့် ဆယ်လ်ဖီရိုက်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ထိုပုံကို အမည်မဲ့ ဆိုသူက ဖေ့စ်ဘုတ်စတင်ပြီး အနည်းဆုံး အကြိမ် ၁၀၀၀ ထပ်မံမျှဝေကြသည်ဟု Jun က ပြောသည်။
“ကျနော်လည်း ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ချစ်ပါတယ်။ ကျနော် တိုက်ခန်းတခန်းကို ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ ရှာထားတာ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဖေ့စ်ဘုတ်ကို မုန်းလည်းမုန်းတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဲဒီဖိုတိုရှော့ မရပ်မနားပျံ့နေလို့ပဲ” ဟု မိုဒမ်နီက ပြောသည်။
မိုဒမ်နီ၏ ရှေ့နေ ပြောသည့် ပုံများသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း မရှိစေရန် ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ဖေ့စ်ဘုတ်က ကြေညာသည်။ “ထိုကြောင့် ဥပဒေအရ အရေးယူရန် လိုသည်၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည် ဟု ကျနော်တို့ မယုံကြည်ပေ” ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ။
(The Washington Post တွင် ဖော်ပြထားသည့် Stephanie Kirchner နှင့် Anthony Faiola တို့၏ His selfie went viral for all the wrong reasons. Now this refugee is suing Facebook. ကို ဘာသာပြန်သည်။)